१७ सेकेन्ड अघि रातोपाटी
वि.सं.२०७७ साल मंसिर १४ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २९ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–चतुर्दशी,१५ घडी ०५ पला,मध्यान्ह १२ बजेर ३९...
डिप्रेसन एक प्रकारको मानसिक रोग हो । यसलाई मानिसहरूले धेरै ठूलो रोगको रूपमा लिन्छन् । यसको उपचार समयमै गर्न सकियो भने निको पनि हुन्छ । डिप्रेसनले सोचाइ र व्यवहारमा असर गर्छ । डिप्रेसन मानिसलाई हुने रोगहरूमध्ये प्रमुख रोग हो ।...
केके छन् ओलीले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा ? [पूर्णपाठ]
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूमाथि लगाएको आरोपको लिखित जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डका आरोपको लिखित जवाफ दिएका हुन् । यसअघि कात्तिक २८ गते...
काठमाण्डाै - इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । गएराति भएको खेलमा ब्राइटनसँग १-१ गोलको बराबरी खेल्दै एक अंक जोडेको लिभरपुल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । यसअघि समान २० अंक भएपनि टोटनह्यामसँग गोल अन्तरमा पछि रहेको लिभरपुल दोस्रो...
साथीहरुले यति घटिया ‘पाप’ पनि कसरी चिताउन सक्दा हुन् ? : ओली
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा लिन तयार रहेको भन्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ति कोट्याएका छन् । शनिवार नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत लिखित जवाफको ४१ नम्बर बुँदामा ओलीले प्रचण्डसँग त्यसको अर्थ माग्दै...
बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ : ओली
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी परियोजनाका बारेमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक आक्षेप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतका सरकारले अघि बढाएको परियोजनालाई आफूले अघि मात्रै बढाएको भन्दै ओलीले प्रचण्डलगायतका विगतका हस्ताक्षरकर्ता 'राष्ट्रवादी' र आफूलाई चाहिँ ‘राष्ट्रिय...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना किशोर प्रधानलाई पराजित ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । यो जितसँगै ढकाल महासंघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको छ । ...
बाडुली लाग्दा कसैले आफूलाई सम्झिरहेको हुन्छ भन्ने लोकोक्ति छ । छिटो खाने सुरमा खाना राम्ररी नचपाउँदा बाडुली लाग्न थाल्छ । बाडुली लाग्दा पानी पिउने सल्लाह दिइन्छ । तर किन लाग्छ बाडुली ? यसको उत्तर वैज्ञानिकले पनि दिन सकेका छैनन् । ...
१४ मंसिर, काठमाडौं । चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार विहान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिते। अब उनले शेखर गोल्छापछि महासंघको अध्यक्ष बन्ने पक्का गरेका छन् । बाग्लुङको बलेवा, अमलाचौरका जन्मिएका चन्द्रको भुइँबाट उठेर सफलताको यो उचाइसम्म आइपुगेका व्यक्ति हुन् ।...
कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या १४ लाख ५० हजार नाघ्‍यो
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या साढे १४ लाख नाघेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ लाख ५७ हजार नाघेको हो । ​ वल्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म विश्वभर १...
काठमाण्डाै - यसवर्ष माघ, फागुनमा बिहे गर्नेलाई न बिहे गरेजस्तो भयो न वैशाख र असारमा बिहे गर्न खोज्नेको रहर पुग्यो । कोरोनाले गर्नु गर्यो, ६/७ महिनासम्म घरभित्रै बस्नुपर्यो । बाहिर घुमफिर र रमाइलोमा निस्कनु त परको कुरा, घरभित्रै श्रीमान-श्रीमतीसमेत...
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रिडी–रुद्रवेणी–हर्मिचौर सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने काम शुरु
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रिडी–रुद्रवेणी–हर्मिचौर सडकखण्डको कालोपत्रे गर्ने काम शुरु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर १ को रिडीमा कालोपत्रे गर्ने कामको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । कालिगण्डकी करिडोर सडक योजना अन्तर्गत नवलपुर, पाल्पा, गुल्मी,...
काठमाण्डाै – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिनुभएको छ । आज बसेको सचिवालय बैठकमा उहाँले सबै सचिवालय सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि जवाफी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । प्रस्तावमाथि सचिवालय...
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल डिजिटल युगतर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभएको छ । काठमाण्डाैमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीपछि धेरै क्षेत्र ध्वस्त भए पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको खोज र विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र लागेको बताउनुभयो । कोरोनाले हरेक...
दालचिनी प्रायः सबै घरमा पाइने मसला हो । यसमा भएका गुणले स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवैलाई फाइदा गर्छ । अझ यसमा मह पनि मिसाइयो भने त यसको असर दुईगुणा बढ्छ । यसका यस्ता फाइदा हुन्छन् : क्यान्सर कलेजोको क्यान्सर र हड्डी...
काठमाण्डाै - नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी हुनुभएको छ । हिजो भएको चुनावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का उम्मेदवार किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो । नवनिर्वाचित ढकालले शेखर गोल्छापछि महासंघको नेतृत्व सम्हाल्नुहुनेछ । महासंघको विधानअनुसार...
कफी पिउने मानिसको बढ्छ आयु !
क अनुसन्धानका अनुसार दिनमा तीन पटक कफी पिउनाले तपाईको आयु बढ्न सक्छ । यो अनुसन्धान यूरोपको दश देशका करिब पाँच लाख मानिसमा गरिएको थियो । यो अनुसन्धान ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका मानिसहरुमा गरिएको थियो । एनाल्स अफ इन्टरनेल मेडिसिन...
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अब जित–हार भुलेर महासंघलाई बलियो बनाउन अघि बढ्ने बताएका छन् । विहान चुनाव जितेपछि सञ्चारमाध्यसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ढकालले अब चुनावसँगै प्यानल पनि सकिएको बताए । उनले अब...
१४ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । योसँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्र ढकाल विजयी भएका छन् । आइतबार बिहान मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकाल महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । यसैगरी वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र दिनेश श्रेष्ठ...
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजयी, किशोर प्रधान पराजित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा व्यवसायी चन्द्र ढकाल विजयी भएका छन् । आइतबार बिहान आएको मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै ढकाल महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन मानिने महासंको नयाँ नेतृत्वका...
मानिसमा धुनिकरण बढ्दै गएको छ । कति मानिस चम्चा तथा काँटाले खानेकुरा खाने गर्दछन् । अध्ययनले बताए अनुसार विश्वभरको तत्थ्याङ्क हेर्ने हो भने धेरै जसो मानिसले चम्चा तथा काँटाले खानुभन्दा हातले खानुमै सहज मान्छन् । यद्यपि हातले खाना खाने विषयलाई...
औंला पड्काउँदा आवाज आउँछ नि । कहिल्यै याद गर्नुभएको छ किन आवाज आउँछ भनेर ? अनि यसो गर्नु खतरनाक हो कि होइन ? एउटा कुरा सुनिश्चित छ । औंला पड्काउँदा बाथरोग लाग्दैन । कसैले लाग्छ भन्यो भने त्यो झुटो हो...